Indlu yaseJefferson Ranch - I-Airbnb
Indlu yaseJefferson Ranch
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguDwight
IJefferson Ranch House iyimigangatho eyi-1.5, eyenzelwe ngokwesiko, i-3,050 yesikwere sonyawo lokungena ekhaya. Eyakhiwe ekuqaleni kwi-1998, iye yahlaziywa kakhulu ukuphucula induduzo yeendwendwe ngo-2018.
Indawo yomgangatho wokuqala yi-2,065 yeenyawo zesikwere kwaye inendawo yokuhlala enkulu evulekileyo, enekhitshi, indawo yokutyela kunye negumbi lokuhlala phantsi kwesilingi evalekileyo. Ikhitshi le-gourmet lixhotyiswe kakuhle ngezitya kunye nezinto zokupheka kwaye inomsebenzi owaneleyo, indawo yokugcina, kunye nefriji.
Kukho amagumbi amabini okulala kumgangatho omkhulu: i-ensuite yenkosi enkulu kunye nendlu yokumkanikazi. Kukho amagumbi okuhlambela amabini kumgangatho omkhulu. I-master ensuite inebhafu enkulu yesoaker elingana kakuhle nabantu ababini.
Kumgangatho ophakamileyo we-986 square foot, kukho ii-queen loft nooks ezimbini, ezivaliweyo ukwenzela ukuba ngasese kweendwendwe. Igumbi leMidlalo likwabekwe kwindawo ephezulu yeJefferson Ranch House. Ibonisa ibha, itafile yepool, iTV enonxibelelwano lwesathelayithi, ifoosball kunye netafile yehoki yomoya.
Kukho ipatio egqunyiweyo ngapha nangapha kwendlu yonke eneembono ezinomtsalane zeentaba kunye nokutshona kwelanga phezu kweLake iMeadow kunye neMarble Range. Isibini kwisithathu sepatio sihlolwe; Eli candelo libonisa indawo yokutyela enezihlalo ze-16 kunye nendawo yokuphumla eneebhedi.
Indlu ubukhulu becala ifudunyezwa ngamaplanga avuthayo ashushu. Ukufudumeza okwesibini kunikezelwa yindawo yethu yokutshisa iinkuni kunye nezifudumezi zebhodi zombane.
I-Wifi iyafumaneka kule ndlu kwaye uninzi lweendwendwe zethu zineselfowuni epheleleyo ngexesha lotyelelo lwabo. Igumbi lokuhlala libonisa iTV enonxibelelwano lwesatellite. Kwisithuba esiphezulu, idesika eneprinta-photocopier iyafumaneka ukuze isetyenziswe ziindwendwe.
Kwakhona ibekwe kwindawo enekhapoti enkulu egqunyiweyo. Ukutshaja kwe-EV kuyafumaneka; Iindwendwe ziyacelwa ukuba zize nezazo iitshaja kunye neeadaptha.
Ngeminyaka yoo-1800, iindawo zokuhlala zakhula kule ndawo ngophuhliso lweNdlela yeCariboo Wagon kunye nokufunyanwa kwegolide.
Indlela iCariboo Wagon ilandela i-Hudson’s Bay Harrison Trail yoqobo, ifikelela emantla ukusuka eLillooet (iMayile 0) ukuya eCariboo Gold Fields. Ukuqala eLillooet, indlela yahamba iimayile ezingama-47, ngaphaya kweNtaba yePavilion, idlula iLake iKelly, ukuya kutsho kwiNdlela yaseCut-Off, apho yadibana khona neYale-Cariboo Road. Uluntu olusekwe ekudibaneni kwezi ndlela zimbini lwaziwa njenge 47 Mile House. Ngo-1863 indawo yedolophu yathiywa ngokusemthethweni igama elithi “Clinton” nguKumkanikazi uVictoria ngembeko yeNkosi uHenry Pelham Clinton.
Ngexesha leCariboo Gold Rush, indawo yokuhlala yayenza yayindawo ephithizelayo kunye nendawo efanelekileyo yokuphumla kubahambi abadiniweyo kunye nabasebenzi basezimayini abahamba besiya nokubuya kumasimi egolide eBarkerville.
Yathi yakudamba i-“Gold Fever”, kwaphuhliswa ishishini lokufuya. Ezinye zeefama zokuqala ezifana neMaiden Creek Ranch, iMound Ranch kunye nePollard Ranch zisasebenza namhlanje.
Ekuqaleni kweminyaka yee-1950 amahlathi aba ngundoqo wezoqoqosho. Ngaxa lithile, kwakusele kusenziwa oomatshini bokungqusha basehlathini abangama-20 neesarha kulo mmandla. Ukumanyanisa ngeminyaka yee-1970 kwakhokelela ekubeni kuqhubeke utyando olunye kuphela. Le mill, eyaziwa ngokuba yiChasm Sawmills, icandelo leWest Fraser Mills, yavalwa ngo-2019.
Ukusukela phakathi kwiminyaka yee-1970, abantu baseClinton baye banda kancinci. Namhlanje uClinton kunye nommandla baqhayisa ngezixhobo ezininzi kunye neepaki ezinomhlaba, ngelixa begcina incasa kunye nenkangeleko yedolophu esemdeni.
KwiSitrato esiPhambili, uya kufumana iivenkile ezinqabileyo, iihotele / iimotel, ii-pubs, iivenkile zekofu, iivenkile zokutyela kunye nezikhululo zegesi, apho umntu anokufumana khona ubuncwane obufihliweyo, abambe isidlo esikhulu okanye ahlaziye kwaye afake i-refuel.
Umbuki zindwendwe ngu- Dwight
IRantshi yeeNdwendwe iMeadow Lake ikhathalelwa ngabaphathi bethu ababini beeRantshi. Bahlala ixesha elizeleyo kwipropati kwindlu yabo, kodwa bayafumaneka ukuze bancede ukuba bayafuneka.
Kwi-Ranch, siyaqonda ukuba abantu beza ukuhlala nathi ukuze bafumane uxolo noxolo: ngoko ke, umgaqo-nkqubo wethu uhlala ungowokuba abaphathi kunye nabasebenzi bahlala behloniphekile kwiindwendwe, ngaphandle kokuba kuyimfuneko. Oku kuya kuqhubeka.
Ukongeza, abaphathi kunye nabasebenzi ngoku baya kuziqhelanisa nentlalontle kunye nazo zonke iindwendwe ngexesha lokuhlala kwabo. Ubuncinane beenyawo ezintandathu kuya kugcinwa phakathi kweendwendwe kunye nabasebenzi, ngaphandle kokuba iimeko ezinzima zifuna enye indlela.
IRantshi yeeNdwendwe iMeadow Lake ikhathalelwa ngabaphathi bethu ababini beeRantshi. Bahlala ixesha elizeleyo kwipropati kwindlu yabo, kodwa bayafumaneka ukuze bancede ukuba bayafu…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Clinton